Reer Jowhar Jihaddee ayey u jiheysan doonaan?FALLO: Anwar Bakhiit
| Comments() Jabuuti--KNN--Reer Jowhar waxaa maanta u curtay Waa Cusub, kadib, markii Maamulka Kooxda Alshabaab oo muddo Reer Jowhar waxaa maanta u curtay Waa’ Cusub, kadib, markii Maamulka Kooxda Alshabaab oo muddo shan sanno ah ka arrimin jireen magaallo-madaxda Gobalka Sh/dhexe ee Jowhar uu maanta Gabalkoodii dumay, kadib, markii lagala wareegay gacan-ku-haynta Jowhar iypo Deegaanno kale oo muhiim u ahaa.
Ciiddamadda Huwanta (AMISOM iyo kuwa Dowladda) oo ay ku Milan yihiin boqolaal Dagaalyahanno horeyu uga soo goostay Kooxda Alshabab, ayaa Waaberigii hore u suurto-gashay inay si nabad ah kula wareegaan Jowhar, Garoonka Diyaradaha, Xeraddii Ciiddamadda ee Kongo iyo Deegaanno kale.
,Hoggaamiyihii Maamulka Alshabaab, Sheekh Yuusuf Kabo-ku-tukade iyo Saraakiil kale ayaa 00gtii hore ee saakayto ka huleelay Johar, iyagoo u jiheystay dhinaca Degmadda Buulo-burte ee Gobalka Hiiraan, oo ay Kooxdaasi maamusho.
Qabsashadda Jowhar ayaa noqonaysa dhabar-jabkii ugu ballaarnaa Kooxda soo gaarta, tan iyo markii Kooxdaasi lagala wareegay goobo muhiim ah oo ay dhaqaale xooggan ka heli jireen.
Maleeshiyadda Alshbaab ayaa waxaa xilligan lagu tilmaamaa inay ku sugan yihiin Xaalladihii ugu Xumaa, iyadoo ay ka soo wada xirmayaan Ilihii Dhaqaalaha ee ay dagaalladda ku maalgelin jireen.
Qabsashddii Ciiddamadda Dowladda iyo kuwa AMISOM ee Suuqii Bakaaraha, Degmooyinka Afgooye, Marko iyo Xayiraaddii dhoofinta Dhuxusha ee Kismaayo ayaa waxay Maleeshiyaddu ku noqotay dhabar-jab ay la dhukinayaan, maadaama Ilo naas-nuujin u ahayd goobahaasi, oo laga taakuleyn jirey.
Khubarradda Milliteriga ee hagayso Dagalladda ka dhanka ah Kooxda Alshbaab, ayaa ku qanacsan sida xeelladaysan ee loo go’doominayo Kooxdaasi gacan-saarka la leh Urueweynaha Aegagixisadda ee Alqaacida.
Guuldarradda Kooxda Alshabaab ee maanta lagala wareegay Jowhar ayaa micno xooggan leh, iyadoo ay hubaal tahay inay Kooxda mooraal ahaan haatan ka niyad-jabsan yihiin qaabka ay wax u socdaan, iyadoo Ciiddamadda Huwanta doonayaan sidii la isugu furi lahaa Muqdisho iyo Goballadda Sh/dhexe iyo Hiiraan, inkastoo Kooxdu weli ku sugan yihiin qeybo ka mid ah Goballadaasi.
Haddaba, markaan u soo laabano Qabsashadda Jowhar, waxaa hubaal ah in Kooxdu maleegtay ama malaeegi doonto xasillooni-darro, sida horey looga arkay magaallooyinkii laga xoreeyey, oo ay weli ka dhacaan falal amni-xumo xambaarsan.
Magaalladda Jowhar, oo ay ku nool yihiin Qabaa’illo dhowr ah, ayaa waxaa ku jira kuwo weli Qalbiga ka taageersan Kooxdaasi, kuwaasi oo iyagu ku kici kara falal horseedi karta inay dagaalamaan Qabaa’illadda halkaasi wada deggan.
Xitaa Dowladda waxaa ku adkan karta Dhismaha Maamulka Jowhar, maadaama ay jiraan Mas’uuliyiin xilal-doon ah, kuwaasi oo gorgortan culus u gelaya sidii ay Beelahooda miisaan ugu yeelan lahaayeen dhismaha Maamulka cusub.
Dareenka Reer Jowhar ayaa waxa uu maanta ahaa mid aad u kacsan, waxayna iyagoo u kala harin cagta mariyeen oo ay biliqleysteen Xafiisyaddii Maamulkii Alshabaab ee arxanka darnaa.
Si kastaba ha ahaatee, Reer Jowhar oo uu maanta u baryey Waa’ Cusub, waxaa isweydiin mudan Jihadda ay u jiheysan doonaan? Ma u darsan doonaan Maamulkii Alshabaab, mise waxay dhisan doonaan Maamul dib u soo celiya Haybaddii Reer Jowhar ee dhulka lagu jiiday 20kii sannadood ee la soo dhaafay?
Email:- wararka@live.se Community Comments